Echiche 5 na eziokwu 5 nke njikọta nke BIM - GIS - Geofumadas
Echiche 5 na 5 nke BIM-GIS
Febụwarị, 2019 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS
Chris Andrews dere ederede bara uru na oge mkparịta ụka na-atọ ụtọ, mgbe ESRI na AutoDesk na-achọ ụzọ isi weta ịdị mfe nke GIS na akwa nke imewe na-agba mbọ ịghọta BIM dị ka ọkọlọtọ na injinia, ụkpụrụ ụlọ na usoro ihe owuwu. Ọ bụ ezie na isiokwu ahụ na-ewepụ anya nke ụlọ ọrụ abụọ a, ọ bụ echiche na-adọrọ mmasị, ọ bụ ezie na ọ dabaghị na usoro nke ndị ọkà okwu ndị ọzọ n'ahịa dị ka Tekla (Trimble), Geomedia (Hexagon) na Imodel.js (Bentley). Anyị maara na ụfọdụ ọnọdụ tupu BIM bụ "CAD nke na-eme GIS" ma ọ bụ "GIS nke na-emegharị na CAD."
Obere akụkọ mere ...
Na 80s na 90s, teknụzụ CAD na GIS pụtara dịka ndị ọzọ na-asọmpi maka ndị ọkachamara chọrọ ịrụ ọrụ na ozi gbasara mbara igwe, nke a na-arụkarị site na akwụkwọ. N'oge ahụ, ọkaibe nke ngwanrọ na ikike nke ngwaike na-ejedebe ókè nke ihe a ga-eji teknụzụ kọmputa na-enye aka, ma maka idepụta ma maka nyocha map. CAD na GIS yiri ka ha na-atụgharị akụkụ nke ngwa ọrụ kọmputa iji rụọ ọrụ na jiometrị na data ga-ewepụta akwụkwọ akwụkwọ.
Dika akụrụngwa na ngwaike aghọọla ndị toro eto na ndị nwere ọkaibe, anyị ahụla ọpụrụiche nke teknụzụ niile gbara anyị gburugburu, gụnyere CAD na GIS, yana ụzọ iji rụọ ọrụ nke ọma dijitalụ (akpọkwara "digitized") workflows. Ngwa ọrụ CAD lekwasịrị anya na rụọ ọrụ na akpaaka site na eserese aka. Iwuli ihe omuma ihe omuma (BIM), usoro iji mezuo nke oma, n'oge imeputa ya na ihe owuwu ya, jiri nke nta nke nta kpochapu ihe ndi BIM na CAD site na ịbịaru ihe okike na iru uzo di omimi nke uwa. . Modelsdị ndị e kere na usoro imepụta BIM nke oge a bụ ọkaibe iji kọwaa ihe owuwu, chọta ntụpọ na mbido mmalite nke imepụta, wee mepụta atụmatụ ziri ezi, maka mmefu ego na mmemme mgbanwe na-agbanwe agbanwe, dịka ọmụmaatụ.
GIS ahutawokwa ihe di iche ma mekwaa ka ikike ya karie n’oge. Ugbu a, GIS nwere ike ijikwa ọtụtụ ijeri ihe omume, site na ihe mmetụta dị ndụ, mee ka anya dị site na petabytes nke ụdị 3D, yana onyonyo na ihe nchọgharị ma ọ bụ ekwentị mkpanaka, ma mee amụma, mgbagwoju anya, na nyocha azịza na ọnụ ọgụgụ akụrụngwa kesara na igwe ojii Maapụ ahụ, nke malitere dị ka ihe nyocha akwụkwọ, ka agbanwere ka ọ bụrụ dashboard ma ọ bụ ọnụ ụzọ nkwukọrịta iji mee nyocha nyocha ndị siri ike n'ụdị ịkọwa mmadụ.
Iji jikota ikike zuru oke nke arụkọtara ọnụ n'etiti BIM na GIS, ihe dị oke mkpa maka ngalaba dịka Smart Cities na Digitized Engineering, anyị ga-enyocha otu ụwa abụọ a nwere ike gafee asọmpi ụlọ ọrụ ma gafere na-arụ ọrụ. Nkeji nke zuru oke, nke ga - enyere anyị aka iwepụ na usoro akwụkwọ nke otu narị afọ gara aga.
Gha: BIM bụ maka…
N’obodo GIS, otu n’ime ihe ndị m na-ahụ ma na-anụ bụ nkọwapụta BIM dabere na nghọta mpụga nke ụwa BIM. M na-anụkarị na BIM bụ maka nchịkwa, nlegharị anya, ihe ngosi 3D ma ọ bụ na ọ bụ naanị maka ụlọ, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụ ihe nwute, na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a abụghị n'ezie ihe BIM na-eji maka ya, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịgbatị ma ọ bụ mee ka ụfọdụ n'ime ike ndị a na-arụ ọrụ.
N'ụzọ bụ isi, BIM bụ usoro iji chekwaa oge na ego, ma nweta nsonaazụ a pụrụ ịdabere na ya nke ukwuu n'oge usoro na usoro ihe owuwu. Thedị 3D emere n'oge usoro imewe BIM bụ site na mkpa nke ịhazi otu ụdị, weghara usoro dịka, iji nyochaa ọnụ ahịa mmebi, ma ọ bụ nye ndekọ iwu ma ọ bụ nkwekọrịta nke mgbanwe na akụnụba anụ ahụ. . Nlere anya nwere ike ịbụ akụkụ nke usoro ahụ, n'ihi na ọ na-enyere ụmụ mmadụ aka ịghọta mgbanwe, njirimara, na ọmarịcha nke atụmatụ a chọrọ.
Dịka m mụtara n’oge dị anya na Autodesk, ‘B’ na BIM na-anọchi anya ‘Mee, ngwaa’ ọbụghị ‘Owuwu, mkpọaha’. Autodesk, Bentley, na ndị ọzọ na-ere ahịa arụ ọrụ na ụlọ ọrụ iji nye echiche nke usoro BIM, na ngalaba dịka ụzọ ụgbọ oloko, okporo ụzọ na okporo ụzọ, ọrụ, na nkwukọrịta. Agencylọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ nzukọ ọ bụla, na-achịkwa ma na-ewulite ihe anụ ahụ, nwere ezigbo mmasị n'ịhụ na ndị nrụpụta ọrụ ha na ndị ọrụ injinia na-eji usoro BIM.
Enwere ike iji data BIM rụọ ọrụ arụmọrụ maka njikwa akụ. Achọpụtala nke a, dịka ọmụmaatụ, na nke ọhụrụ ISO ụkpụrụ maka BIM, nke a gwala, site na usoro ụkpụrụ ụkpụrụ ụkpụrụ UK, guzobere na afọ 10 gara aga. Agbanyeghi na atumatu ohuru a lekwasiri anya na ojiji nke data BIM, na ndu ndu nile nke ihe bara uru, o doro anya na ego di na ugwo ulo, dika edere ya n’isiokwu a, bu isi ihe maka doo nke BIM.
Mgbe a lere ya anya dị ka usoro, ijikọ GIS na teknụzụ na BIM na-abụ ihe mgbagwoju anya karịa ịgụ ọgụgụ eserese na njiri mara site na ụdị 3D ma gosipụta ha na GIS. Iji ghọta nke ọma otu esi eji ozi na BIM na GIS, anyị na-ahụkarị na anyị ga-akọwagharị echiche anyị banyere ụlọ ma ọ bụ okporo ụzọ, ma ghọta etu ndị ahịa kwesịrị iji ọtụtụ ọrụ data na ọnọdụ geospatial. Anyị chọpụtakwara na ilekwasị anya n'ihe nlere anya oge ụfọdụ pụtara na anyị elegharala usoro dị mfe, nke kachasị arụ ọrụ nke dị mkpa maka usoro ahụ dum, dị ka iji data anakọtara n'ọhịa nwere nkenke na saịtị iwu, iji jikọta ọnọdụ ahụ na data ihe nlere maka nyocha, ngwongwo na nyocha.
Na ngwụcha, naanị ihe anyị ga - enweta bụ nghọta na nsonaazụ bụ naanị ma ọ bụrụ na anyị “gafere oghere ahụ” iji rụọ ọrụ na otu egwuregwu nwere ike iweta ụdị dị iche iche na nsogbu nsogbu. Ọ bụ ya mere anyị ji arụ ọrụ na Autodesk na ndị mmekọ ndị ọzọ na oghere a.
Nmekorita nke Esri na Autodesk, nke ekwuputara na 2017, bu nnukwu uzo iji mee ka ndi otu nzuko a ghazie iji dozie ufodu nsogbu nke ntinye BIM-GIS.
Echiche :gha: BIM na-enye atụmatụ GIS na-akpaghị aka
Otu echiche siri ike izigara onye na-abụghị BIM-GIS bụ, n’agbanyeghi ihe BIM na-ele anya dị ka àkwà mmiri ma ọ bụ ụlọ, ọ bụchaghị njirimara ndị mejupụtara nkọwapụta ụlọ ma ọ bụ akwa maka ebumnuche eserese. nke nyocha geospatial.
Na Esri, anyị na-arụ ọrụ na ahụmịhe ọhụụ maka igodo ụlọ na njikwa akụ, dị ka ArcGIS Indoors. Ọtụtụ ndị ọrụ atụwo anya na site na ọrụ anyị na Autodesk Revit data, anyị nwere ike iwepụta geometries ndị nkịtị dịka ụlọ, oghere, atụmatụ ala, akara ụkwụ ụlọ, na usoro nke ụlọ. Ọbụna nke ka mma, anyị nwere ike wepụ ntupu ụgbọ mmiri iji hụ otu mmadụ ga-esi gafee usoro ahụ.
Geometries ndị a niile ga-aba uru maka ngwa GIS yana maka njikwa njikwa njikwa azụmaahịa. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị nke geometries ndị a chọrọ iji wuo ụlọ ahụ ma n'ozuzu adịghị adị na ụdị Revit.
Anyị na-enyocha teknụzụ iji gbakọọ geometry ndị a, mana ụfọdụ na-enye nyocha dị mgbagwoju anya na nsogbu ịma arụ na-egbochi ụlọ ọrụ ahụ ọtụtụ afọ. Gịnị bụ a water Ada Ada? Ọ gụnyere ntọala ahụ? Kedu maka mbara ihu? Kedu ihe bụ usoro nzọ ụkwụ? Ọ gụnyere ihe karịrị otu? Ka ọ bụ naanị nkwụsị nke ihe owuwu ahụ na ala?
Iji hụ na ụdị BIM nwere ọrụ achọrọ maka GIS workflow, ndị na-ahụ maka ya ga-akọwa nkọwa maka ozi ahụ tupu imewe na iwu ụlọ amalite. Dika usoro mgbanwe CAD-GIS nke ochie, nke emere ka data CAD di nma tupu emegharia ya na GIS, usoro BIM na ihe nchoputa agha gha aghaputa ma tinye agwa ndi eji eme ihe n’oge njikwa nke usoro ndụ nke usoro, ọ bụrụ na nke ahụ bụ ebumnuche nke ịmepụta data BIM.
E nwere òtù dị iche iche gburugburu ụwa, ndị gọọmentị na ndị na-arụ ọrụ nke ụlọ akwụkwọ na-achịkwa ma ọ bụ usoro akụ, nke bidoro ịchọ ka ndụ na njirimara ndụ banye na ọdịnaya BIM. Na United States, Nchịkwa Ọrụ Gọọmentị na-ebugharị ihe owuwu site na ihe BIM chọrọ na ụlọ ọrụ dịka ndị nchịkwa nke ndị agha Veterans agafeela ogologo iji kọwaa ihe BIM, dịka ụlọ na oghere, nke ga-aba uru na njikwa ụlọ ọrụ mgbe arụchara ụlọ ahụ. Anyị achọpụtala na ọdụ ụgbọ elu, dịka Denver, Houston, na Nashville, na-achịkwa njikwa data BIM ha ma na-enwekarị data na-agbanwe agbanwe. Ahụla m ụfọdụ okwu dị ukwuu sitere na SNCF AREP nke wuru usoro BIM zuru ezu maka ọdụ ụgbọ oloko, dabere n'echiche bụ na a ga-eji data BIM rụọ ọrụ yana njikwa ọrụ njikwa akụ. Enwere m olileanya ịhụ karịa nke a n'ọdịnihu.
Data e kesara anyị site na George HW Bush Houston International Airport (nke egosiri ebe a na Web AppBuilder) na-egosi na ọ bụrụ na ahaziri data BIM, na-abụkarị site na ịbịaru ngwaọrụ nkwado, mgbe ahụ enwere ike itinye ya na GIS. . Elezie anyi na ahu ozi banyere ihe owuwu n’ime udi BIM tupu ilere ozi metutara FM
Gha: enwere usoro faịlụ nke nwere ike inye ntinye BIM-GIS
Na usoro mmekorita azụmaahịa ejiri mara, enwere ike ịdepụta otu tebụl ma ọ bụ usoro ọzọ na tebụl ọzọ ma ọ bụ usoro iji nwee ike ịnyefe ozi n'etiti teknụzụ dị iche iche. Maka ebumnuche dị iche iche, usoro a abaghị nke zuru oke iji dozie mkpa nke tOzi narị afọ nke 21 na-aga:
Ozi echekwara na faịlụ siri ike ibufe
Ntinye data gafee ngalaba mgbagwoju anya nwere mfu
Ọrụ nke data na-egosi nnomi ọdịnaya na-ezughi ezu na sistemụ
Nhazi data agbasaghị oge ọrụ.
Teknụzụ, nnakọta data na ọrụ ndị ọrụ na-agbanwe ngwa ngwa nke na e kwesiri nkwa na ntanetị taa ga-erughị ihe echi ga-achọ.
Iji mezuo uzo digitization, ihe dijital a nke onu ogugu agha kwesiri inweta ngwa ngwa gburugburu ebe ekesara, nke apuru imeghari ma nyegharia ya karia iju ajuju, nyocha na nyocha oge na oge a. ndu bara uru nke ihe bara uru.
Otu ụdị data enweghị ike ịgụnye ihe niile enwere ike ịbanye na BIM na GIS n'ofe ụlọ ọrụ dị iche iche na mkpa ndị ahịa, yabụ enweghị usoro ọ bụla nwere ike ijide usoro a niile n'ụzọ dị enwere ike ịnweta ya ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ bụ nduzi. Ana m atụ anya na teknụzụ njikọta ga-aga n’ihu na-eto eto karịa oge, ebe BIM na-abawanye ọgaranya na ọ dị mkpa iji data BIM n’ihe gbasara GIS maka njikwa ndụ ndụ, ọ ga-adị oke egwu. maka obibi nke mmadu.
Ebumnuche nke njikọta BIM-GIS bụ iji mee ka usoro ọrụ iji mepụta ma jikwaa akụ. Enweghi ezi uzo doro anya, mbufe di iche n'etiti uzo uzo abuo a.
Gha: cannot nweghị ike iji ọdịnaya BIM na GIS
N'adịghị ka mkparịta ụka banyere otu esi achọta atụmatụ GIS na data BIM, anyị na-anụkarị na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụ enweghị ike iji ọdịnaya BIM na GIS maka ihe kpatara sitere na mgbagwoju anya nke ọma, oke akụ, ruo ọnụ ọgụgụ akụ. Mkparịta ụka a na BIM-GIS mwekota na-agbadoro ụkwụ na usoro faịlụ na wepụ Extra, Transform and Load (ETL).
N'ezie, anyị na-eji ọdịnaya BIM eme ihe ozugbo na GIS. N'oge ọkọchị gara aga, anyị webatara ikike iji gụpụta faịlụ Revit na ArcGIS Pro. N'oge ahụ, ụdị ahụ nwere ike iso ArcGIS Pro na-emekọrịta ihe dị ka a ga - asị na ọ bụ atụmatụ GIS ma mezie ya ka ọ bụrụ usoro GIS ndị ọzọ site na mbọ aka, ma ọ bụrụ achọrọ. Site na ArcGIS Pro 2.3, anyị na-ahapụ ikike ibipụta ụdị oyi akwa ọhụrụ, ebe a na-ewu ihe owuwu , nke na-enye onye ọrụ ohere ịnwepụta usoro mmụta asụsụ, geometry, na nkọwapụta nkọwa nke ụdị Revit n'ụdị a pụrụ ịbawanye nke ewuru maka ahụmịhe GIS. Ngwurugwu ihe owuwu ụlọ, nke a ga-akọwa na nkọwapụta I3S na-emeghe, na-eche dị ka usoro Revit nye onye ọrụ ma na-enye ohere mmekọrịta site na iji ngwaọrụ na omume GIS.
Enwere m obi ụtọ ịchọpụta na n'ihi nnweta bandwit, nchekwa dị ọnụ ala, na nhazi dị ọnụ ala karịa, anyị na-esi 'ETL' gaa 'ELT' ma ọ bụ na-arụ ọrụ. Na ihe nlere a, a na-ebugo data na sistemụ ọ bụla chọrọ ya n'ụdị ya ma nwee ike ịnweta maka ntụgharị gaa na usoro dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe data ebe a ga-eme nyocha ahụ. Nke a na-ebelata ịdabere na nhazi isi iyi, ma na-echekwa ọdịnaya mbụ maka mgbanwe ka mma ma ọ bụ miri emi ka teknụzụ na-akawanye mma. Anyị na-arụ ọrụ na ELT na Esri ma o yiri ka anyị abụrụ isi uru nke mgbanwe a mgbe m zoro aka na 'wepụ E na T site na ETL' na ogbako n'afọ gara aga. ELT na-eme ka mkparịta ụka a gbanwee nke ọma site na ọnọdụ nke onye ọrụ ga-ejikọrịrị ya na mpụga nke ahụmịhe GIS iji chọọ ma ọ bụ jụọ ụdị ahụ n'ozuzu ya. Mgbe ị na-etinye data ahụ ozugbo na ụkpụrụ ELT,
Gha: GIS bụ ebe nchekwa zuru oke maka ozi BIM
Enwere m okwu abụọ: "Ndebanye aha iwu." Akwụkwọ BIM na-abụkarị ndekọ iwu nke mkpebi azụmaahịa na ozi nnabata, nke edere maka nyocha nke nrụrụ ụlọ na ikpe ikpe, ụtụ isi na koodu nyocha, yana ihe akaebe nke nnyefe. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na ndị injinia ga-emerịrị ma ọ bụ gosipụta na ọrụ ha dị irè ma zute ihe chọrọ nke ọpụrụiche ha na iwu ma ọ bụ koodu dị mkpa.
N'oge ụfọdụ, ọ ga-eche na GIS nwere ike ịbụ usoro ndekọ maka ụdị BIM, mana n'oge a, echere m na nke a bụ ọtụtụ afọ ma ọ bụ ọtụtụ iri afọ, nke usoro iwu kwadoro nke ka na-eji usoro kọmputa arụ ọrụ. Anyị na-achọ nnweta ọrụ, iji jikọta akụ na GIS na akụ dị na nchekwa BIM, ka ndị ahịa nwee ike iji akara mbipute akwụkwọ na akwụkwọ achọrọ na ụwa BIM yana ikike nke maapụ, itinye ihe ọmụma bara uru na ọnọdụ ihu igwe bara ụba maka nyocha na nghọta na nkwukọrịta.
Yiri akụkụ nke "atụmatụ GIS" nke mkparịta ụka ahụ, njikọta nke ozi n'ofe BIM na GIS ga-enyere aka nke ukwuu site na usoro ozi agbachitere na GIS na BIM, nke na-enye ohere ka ngwa jikọta ozi a pụrụ ịdabere na ya n'etiti ngalaba abụọ ahụ. Nke ahụ apụtaghị na a ga-enwe otu ụdị ozi ịmaatụ, iji weghara ozi GIS na BIM. Enwere otutu ndi iche na uzo eji eji data eme ihe. Mana anyị kwesịrị ijide n’aka na anyị na-ewughachi teknụzụ na ụkpụrụ na-agbanwe agbanwe, nke nwere ike imeghari na ojiji nke ozi na nyiwe abụọ yana ntụkwasị obi na nchekwa nke ọdịnaya ozi.
Mahadum Kentucky bụ otu n'ime ndị ahịa mbụ nyere anyị ohere ịnweta ọdịnaya Revit ha. UKy na-eji nkwado ịse ihe siri ike iji jide n'aka na data ziri ezi dị na data BIM iji kwado ọrụ ndụ na ndozi zuru oke.
Mgbanwe nke ngwaike na ngwanrọ, na ịkwaga na igwe mmadụ, data na-eduzi data, na-ekepụta ohere iji jikọta teknụzụ dị iche iche na ngalaba ndị na-adịtụbeghị mbụ. Mwekọta nke data na arụmọrụ na-esite na GIS na BIM, na-enye anyị ohere inweta arụmọrụ ka ukwuu, nkwado na obibi nke obodo, ogige na ebe ọrụ gbara anyị gburugburu.
Iji nweta ọganiihu na teknụzụ, ọ dị anyị mkpa imepụta otu egwuregwu na mmekọrịta, iji wepụta azịza maka nsogbu dị mgbagwoju anya nke metụtara usoro niile, ọ bụghị nke pụrụ iche na arụmọrụ arụmọrụ. Anyi aghaghi itughari aka na usoro ohuru ohuru, nke nwere ike idozi nsogbu ndi mmadu karie ike. Integrationkpụrụ GIS na BIM nke anyị nabatara taa ga-abụrịrị "ihe akaebe n'ọdịnihu" ka anyị wee nwee ike ịrụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịnihu ga-adigide.
Previous Post«Previous Kedu otu m si nweta Venezuela
Next Post Otu esi ewepu ihe oyiyi si Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery na isi mmaliteNext »
Otu azaghachi na "akụkọ ifo 5 na akụkọ 5 nke BIM - GIS mbanye"
Juan Toro kwuru, sị:
March, 2019 na
Hi, ezigbo ụtụtụ si Spain.
Ntughari na-adọrọ mmasị.
Ọ bụrụ na ihe doro m anya, ọdịnihu na-atọ ụtọ na-echere anyị, ụzọ jupụtara n'ihe ịma aka na ohere, n'ime Geomatics, nke ọdịnihu ga-amata otu esi agbanye n'ime ikike, ịdị mma na imekọ ihe ọnụ ga-enwe ọdịnihu.